Shaxda Leeds United Ay Kaga Yaabsan Doonto Kooxaha Premier
Leeds United oo 16 sannadood kaddib usoo dallacday horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa la saadaalinayaa inay xamaasad cusub kusoo kordhin doonto horyaalka, isla markaana ay lasoo bixi doonto cadaawaddii guunka ahayd ee ay u haysay kooxaha qaarkood.
Garoonka Elland Road ayay kooxo badan isku diyaarin doonaan inay tagaan iyadoo ay ku sugayaan jamaahiirta qaylada badan, xamaasaddoodana aan la xakamayn karin ee mararka qaarkood rabshadduna u raacdo, waxaana si gaar ah isha loogu hayn doonaa kulamada Manchester United iyo Liverpool ku tegi doonaan.
Tababare Marcelo Bielsa ayaa dhisaya koox adag oo wacdaro ka dhigi karto horyaalka oo sannadkii horena ay sigeen inay usoo dallacaan, waxaana haddaba la hadal hayaa xiddigo waaweyn oo markii hore kasoo baxay kooxdaas oo dib ugu laaban doona.
Kooxdan oo ka dhisan Yorkshire, waxay waqtiyada qaarkood ahaan jirtay naadi weyn, waxaanay wali leedahay taageereyaal badan marka loo eego kooxaha kale ee waqtigan ka ciyaara heerka koowaad ee Premier League, waxaanay inta badan jamaahiirta Leeds yihiin Ingiriis.
Ruug-caddaaga Liverpool ee James Milner oo dareen qiiro leh kusoo dhoweeyey soo dallicidda Leeds United oo uu hore u ballanqaaday inuu u ciyaari doono marka uu Liverpool ka tago ayaa durba kusoo baxay liiska ciyaartoyda la saadaalinayo inay Elland Road ku waajahan yihiin.
Milner waxa uu horraantii xagaagan saxeexay laba sannadood oo heshiis ah, hase yeeshee waxa qalbigiisa ku weyn in Leeds United oo uu u icyaaray sannadihii u dhexeeyey 2002 ilaa 2004 uu mar labaad funaanaddeeda xidho.
Yasser Larouci oo ka mid ah da’yarta Liverpool ayaa isaguna ku jira liiska ciyaartoyga Leeds United lala xidhiidhinayo, halka goolhaye Joe Hart uu markiiba noqday bartilmaameed.
Labada ciyaartoy ee Jack Harrison oo xili ciyaareedkan kula joogay amaah ay kaga soo qaateen Man City iyo xiddiga Brighton ee Ben White ayaa isaguna ka mid ah ciyaartoyda la filayo inay Leeds United tagaan.
Che Adams oo gool uu ka dhaliyey Manchester City laba usbuuc ka hor ay Southampton 1-0 ugu guuleysatay, xili ciyaareedkii horena Birmingham u dhaliyey 22 gool ayaa isaguna ka mid ah ciyaartoyda la sheegayo inay Elland Road ku socdaan.
Qaab-Ciyaareedka la filayo in Leeds United ay kaga yaabsato Premier League xili ciyaareedka dambe